2 ह्यान्डल बाथरूम सिंक नल क्रोम
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / फराकिलो २-ह्यान्डल उच्च आर्क बाथरूम नल क्रोम
व्यापक 2-ह्याण्डल उच्च आर्क बाथरूम नल क्रोम
डिल डिटेलिंग डिजाईनको साथ तपाईको बाथरूमको लुक उचाई, दुई ह्यान्डल ब्रश निकल बाथरूम सिंक नल तपाईको बाथरूम कालातीत सुन्दरता प्रदान गर्दछ।
2321300C स्थापना निर्देशन
प्रीमियम गुणवत्ता क्लासिक लेआउट प्रचलित नल: ठोस ब्रास स्टेनलेस स्टील बाथरूम नल 2321300C। क्रोम अन्त्य जंगको सामना गर्न सक्छ। उच्च सिलिंग सिरेमिक क्याप्सूल र पानी बचत नियोपरल एरेटर। सजिलो प्रवाह र पानी तापमान नियंत्रक को लागी डबल ह्यान्डल सेटअप। (अर्डर गर्नु अघि कृपया तपाईंको सिink्क आकार मूल्या assess्कन गर्नुहोस्)
रचनात्मक, द्रुत कनेक्ट टेक्नोलोजी: पहिलो अभिनव द्रुत लिंक भवन कुनै पल्म्बर बिना तपाईको आफ्नै स्थापना गर्न सरल छ। पाइप स्थापना शुल्क बचत गर्नुहोस् नलको साथ। ठाउँ तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरूमा समायोज्य छ। फिट भाँडा घर, नयाँ कन्डोमिनियम, एकल-अपार्टमेन्ट, मोटर होम, ट्राभल ट्रेलर र घरेलु उपयोग।
साधारण प्रवाह र पानी तापमान नियंत्रक को लागी सेटअप डबल। फिट भाँडा घर, नयाँ कन्डोमिनियम, एकल-अपार्टमेन्ट, मोटर होम, ट्राभल ट्रेलर र घरेलु उपयोग।
SKU: 2321300 XNUMX१C विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: स्नानगृह सिंक नल, व्यापक रूपमा ह्यान्डल गर्नुहोस्, पॉलिश क्रोम
12.1 x 8.5 x 3.1 इन्च
मैले यो नललाई मुख्य रूपमा किनिएको कारण यो यसको प्रकारको सस्तोमा उपलब्ध थियो, तर स्थापनाको सजिलो किनकी किन म यसलाई फेरि किन्नेछु। फिक्स्चर स्थापना गरेपछि, ती पागलहरू सँग जोडेर पछाडि जोडेर पछाडि पड्काएर ठाउँमा कडा गरिन्छ, जसले सिन्कको मुनि कम्पाड गरिएको क्वार्टरमा लामो ह्यान्डल गरिएको रेन्च घुमाउने प्रयासलाई हटाउँदछ। त्यस्तै, नलीलाई जोड्नको लागि कुनै घुमाउने वा पेच आवश्यक पर्दैन, तर सजीलो फिक्स्चरमा स्नैप गर्दछ।
मेरो केवल निटपिक्सहरू यो हो कि नाली कम्पोनेन्ट कुनै पनि अन्य भन्दा स्थापना गर्न सजिलो छैन, र नलीको प्लास्टिकको अन्तिम भाग थोरै सस्तो देखिन्छ र संभवतः बाहिर लगाएर केही वर्षको रेखामा तोक्ने प्रवण देखिन्छ, तर अहिले सबै कुरा ठीक छ। । निश्चित रूपमा यसलाई एक्लो स्थापनाको सहजताको लागि सिफारिश गर्नुहोस्।
म काउन्टर माथिको पुन: सतह थियो र बाथरूममा लुगाफाटाको निम्ति आर्थिक तरीका खोज्दै थिए। यी नल एक उत्कृष्ट विकल्प थियो। तिनीहरू स्थापना गर्न र राम्रोसँग काम गर्न सजिलो थियो। मूल ड्रेन कलर मेरो सि to्कको लागि ठूलो थियो सबै पानी को राम्रोसँग निकाल्न को लागी। मैले तिनीहरूलाई सूचित गरें र तिनीहरूले मलाई सानो प्रतिस्थापन बाहिर पठाए। यो उत्पादन एक उत्कृष्ट मूल्य हो र तिनीहरूको सेवा असाधारण छ।
यो मेरो बाथरूम सिंकको लागि राम्रो नल प्रतिस्थापन हो। यो एक सफा चिकना शैली छ। मैले ह्यान्डलहरू थोरै लम्बाई भएको आशा गरेको थिएँ, तर एकचोटि मैले उनीहरूलाई केहि समय प्रयोग गरें, तिनीहरू सहि देखिन्छन्। मेरो श्रीमान्ले सबै चीज सजिलैसँग स्थापना गर्नुभयो। म पपअप नाली सुविधाको बारेमा अनिश्चित थिए तर मलाई यो पुरानो ड्रेन लीभर प्रकार भन्दा राम्रो लाग्छ। यो मात्र सबै देखो सरल राख्दछ। मसँग चमकदार क्रोम समाप्त छ र मलाई यो मनपर्दछ। मैले देखेको अन्य भन्दा मूल्य धेरै किफायती थियो। म लामो समयको लागि यसमा रमाईलो गर्न खोजिरहेको छु।
हामीले यसको दुई सेटहरू हाम्रो मास्टर बाथरूममा राख्यौं। ह्यान्डलहरू धेरै सहज रूपमा सञ्चालन गर्दछ। तिनीहरू महसुस गर्छन् र राम्रो देखिन्छन्। तिनीहरू लोभ आदिमा भन्दा दुगुना हुनेछ।
Y *** ई2020-06-10
नल समयमा वितरित भयो र स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो। नयाँ नल स्थापना गर्नु भन्दा पुरानोलाई हटाउन मलाई अधिक समय लाग्यो।
आर *** y2020-06-12
यो नल मास्टर बेडरूममा बाथरूमको लागि हो। हामी pric को लागी उत्पादन को गुणवत्ता संग धेरै प्रभावित थिए
यो सिink्क नल अत्यन्त उच्च गुणवत्ताको साथ बनाईएको हो। यो महँगो ब्राण्ड नाम जस्तो भारी महसुस गर्दछ। स्थापनाको लागि आवश्यक सबै भागहरूको साथ आउँदछ। यो गत हप्ता को लागी स्थापित छ र अब सम्म राम्रो काम गर्दछ! केहि परिवर्तन भएमा अद्यावधिक हुनेछ।
यो नल सुन्दर छ! यो राम्रो गुण हो र राम्रो काम गर्दछ! घुसपैठाहरूले मलाई अलिकता कन्फ्युज गरेको थियो तर म अझै यसलाई स्थापना गर्न सक्षम थिएँ!
एच *** y2020-06-16
मलाई यो नल मन पर्छ! मैले यो महसुस गरेन जब मैले यो आदेश दिएँ कि टाउकोले डुब्न सक्छ जुन वास्तवमै उपयोगी सम्पत्ति हो!
हाम्रो नयाँ नवनिर्मित बाथरूमको लागि नयाँ नल सेट मनपराउनुहोस्! धेरै आधुनिक र पातलो।
मलाई यो नल मन पर्छ। मैले वास्तवमै दुई किनेका थिए र ती दुबै फरक शैलीको बाथरूममा मिलेछन्। यो सस्तो र कडा छ। पप अप नाली राम्रो काम गर्दछ र यो स्थापना गर्न सजिलो थियो। यो सफा गर्न सजिलो छ र धेरै आकर्षक!
म शाब्दिक रूपमा मेरो टाउको यो नलको मूल्य वरिपरि लपेट्न सक्दिनँ र यो कति सुन्दर र सुन्दर देखिन्छ। हामी होम डिपो र लोवमा यस्तै प्रकारका चीजहरू देखिरहेका थियौं जुन दुई गुणा बढी मूल्यको लागि हो। यो पहिलो तीन टुक्रा नल हो जुन मैले स्थापना गरेको छु र यो हास्यास्पद छिटो थियो। सब भन्दा गाह्रो हिस्सा सबै चीज eyeballing र सुनिश्चित गरीरहेको छ कि सबै तीन टुक्रा सही प perfectly्क्तिबद्ध। तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको आपूर्ति लाइनको लम्बाइमा निर्भर गर्दै तपाईंले तिनीहरूलाई तातो वा चिसो ठाउँमा प्लप गर्न अघि जडान गर्न सक्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग टुक्राहरू भित्र छ तिनीहरूलाई कडा पार्नुहोस्। म इमानदारीसाथ यसका बारे पर्याप्त कुरा भन्न सक्दिन। यो एक ठूलो सम्झौता हो र 100% हरेक पैसाको लायक !!
मैले हालसालै यो नललाई बाथरूम पुनर्मिलनको एक भागको रूपमा खरीद गरी स्थापित गरें। म अरूलाई हेर्दा र विचार गरेको भन्दा यो ब्राण्ड / मोडेल खरीद गर्ने मेरो निर्णयबाट म साँच्चिकै खुशी छु। नल सुन्दर देखिन्छ, निर्धक्क संचालन गर्दछ र यसको राम्रोसँग सोच्दछ यसको डिजाइन र निर्माणमा। द्रुत जडान लाइनहरू एक वास्तविक प्लस हो र स्थापना सरल। मैले स्थापनाको बखत कुनै चुहावट वा समस्या अनुभव गरेन, न त मैले नल प्रयोग गर्न शुरू गरेदेखि नै। जे होस् पप-अप ड्रेन प्रदान गरिएको छ, किनकि यो बाथरूम दैनिक प्रयोगमा छ, मैले हटाउन सकिने द्रुत सफा क्याच टोकरीको साथ बिभिन्न ड्रेनको लागि रोजें। म निकट भविष्यमा अर्को कम प्रयोग गरिएको बाथरूममा आपूर्ति गरिएको पप-अप स्थापना गर्ने योजना गर्दैछु।
यी बाथरूममा राम्रो देखिन्छन्। हामीले हाम्रो पुरानो १ 1978 XNUMX फिक्स्चरलाई यीसँग बदल्‍यौं र भिन्नता अविश्वसनीय छ। दबाब कडा महसुस गर्दछ, र उच्च आर्चले चीजहरूलाई सिंक भित्र राख्न सजिलो बनाउँदछ। स्थापना को सरलता पनि मलाई यी सिंक faucets माया गर्‍यो।
बाहिर बाथरूम मा पुरानो Moen बाहिर दिए र रिसाव शुरू - मर्मत पल्ला। एक सस्तो प्रतिस्थापनको आवश्यकता छ। मलाई यसको चिन्ता थियो, किनकि मूल्य कम थियो। जब यो आइपुग्यो म खुशीले आश्चर्य चकित भएँ। यो राम्रो देखिन्छ र निर्देशनहरू पालना गर्न सरल थिए र यसलाई स्थापना गर्न सजिलो थियो (जब मेरो बिल्लीको बच्चा मेरो वरिपरि जम्पिंग भए पनि)। मैले WOWOW बाट एक ईमेल पनि पाएँ ताकि यो निश्चित भयो कि यसले मेरो लागि कार्य गर्यो। धेरै खरीद संग खुशी
ठूलो प्याकेजिंग खोल्दा मेरो पहिलो सोचाइ यो प्युरिन्टी, महान फिनिश, ठोस ब्रास जडानहरू हो, एकदम सजिलो भएको थियो ... यसलाई भनेको यो केवल एक हप्तामा भएको हो त्यसैले यसको दीर्घायुमा कुनै अनुभव छैन, तर अहिलेसम्म म यो प्रेम गर्दछु
मूल्यको कारणले गर्दा यो क्रमबद्ध गर्दा म शंकास्पद थिए। मैले मेरो मालिक स्नानको लागि २ सेट मगाएँ। धेरै राम्रो!! तिनीहरू राम्रो र कडा देखिन्छन्। मेरो प्लम्बर अत्यन्त प्रभावित थियो। अबको रूपमा म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु!
यो पुरानो बाथरूम नल बदल्न थियो। म यस्तो सुन्दर स्थिरताको आशा गर्दिन! मूल्य राम्रो थियो, त्यसैले म धेरै खुसी छु। स्थापना एक हावा थियो। यसलाई पप गर्नका लागि केहि समय लागेन। पुरानोलाई हटाउनको लागि अधिक समय लाग्यो। यो एक ठूलो खरीद हो!
यो सुन्दर उत्तरहरू स्थापना गर्न सजिलो छ। मलाई उत्पाद वर्णनमा रेखाचित्र मनपर्दछ, जसले मलाई विश्वास दिलाउँदछ कि यो मेरो बाथरूममा विद्यमान प्लम्बिंग भागहरू फिट हुनेछ। र यो अपेक्षित रूपमा काम गर्दछ। समग्र दृश्य उत्तम छ।
हामीले यो बाथरूमको नल मोन वा डेल्टाको सट्टा खरीद गर्यौं मूल्यको भिन्नताका कारण र यति धेरै राम्रो छ। यो धेरै राम्रो देखिदैको नल हो र अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गरिरहेको छ।
यो नलको गुणस्तर र समाप्तिसँग धेरै प्रभावित छ। ठिक छ यदि ठुलो नामको ब्राण्ड भन्दा राम्रो छैन र सस्तो छ।
एच *** ए2020-07-26
प्रतिस्थापनको रूपमा यो नल किन्नुहोस्। स्थापना गर्न सजिलो। राम्रो आधुनिक लुक छ। सफा गर्न सजिलो। भित्रका भागहरू काँसाका छन्। पप अप नाली प्रेम गर्नुहोस्। मेरो मान्छेले भन्यो यो हाम्रो पुरानो महँगो नल भन्दा राम्रो निर्माण गरिएको थियो।
एक घण्टामा दुईवटा नल स्थापना गरियो। तिनीहरू धेरै राम्रो देखिन्छन्। प्रेम पुश स्टपर समावेश छ र पानी आपूर्ति लाइनहरु। अहिले सम्म यो उत्पादन तपाइँको पैसाको लागि राम्रो मूल्य हो
यी हेर्ने तरिका मनपर्‍यो! बाथरूम सुन्दर देखिन्छ। स्थापना गर्न धेरै सजिलो र एक सफा दृश्य छ तिनीहरूलाई सफा गर्न सजिलो बनाउने। धेरै चिल्लो सञ्चालन र ठूलो पानी प्रवाह।
घरको साथ खरीद गरिएको हालको सेटअपमा ठूलो सुधार। पुरानो सेटअप लागत $ १२० भन्दा बढि लोहरू / होम डिपोमा। यस मोडेलले राम्रो पानी प्रवाह, नयाँ कम्पोनेन्टहरू र सस्तो स्थापनालाई एकदम उचित मूल्यमा अनुमति दिन्छ। गुण राम्रो देखिन्छ!